Amazon Inotangisa Yechokwadi Dash Mabhatani kune ayo mashandisirwo | IPhone nhau
Amazon inovhura chaiyo mabhatani eDash ekushandisa kwayo
Karim Hmeidan | | IPhone zvishongedzo, IPhone maapplication
Vazhinji venyu muchave vanyori vekutanga veAmazon, iyo Amazon yakashandura mitemo yemutambo wekutenga. Zano rakakura remitengo, uye mukana wekuti isu tine odha zuva rinotevera kumba kwedu mahara, ndizvo zviri kuita kuti Amazon ive nevateveri vazhinji.
Uye chaizvo kune ava vanyoreri vekutanga, Amazon yakatangisa mwedzi mishoma yapfuura iyo inopokana Dash Mabhatani, mamwe mabhatani ekushandisa kutenga michina kutenga yatinoshandisa muzuva redu nhasi. Huye, Amazon inodzokera kukakavara uye inovhura mabhatani ayo akakurumbira ekutenga, iyo Dash Mabhatani, zvirinani, chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chatinogona kutora mukana uri nani ...
Ehezve, zvakanyatsonaka, uye hatigone kumira kufunga kuti uku ndiko kuguma kwekushandisa, chimwe chinhu chine njodzi yakawanda. Sezvaunenge uchitoziva, Dash Mabhatani mabhatani akaunzwa neAmazon kwatiri kuti tiise padyo nemidziyo yedu, kana mumba medu, kuitira kuti Kungodzvanya bhatani iro, vakomana vekuAmazon vakatanga kushanda kuti vatipe izvo zvataive tapererwa nazvo. (Unogona kukanzura kutumirwa kwemaminitsi makumi matatu). Muchidimbu, isu tabuda mupepa rekicheni, tinodzvanya iyo Bhatani Bhatani rechiratidzo chebepa redu rekicheni uye tinoigamuchira kumba.
Mamwe mabhatani ayo, sezvamunoziva, akakurukura neAmazon kuburikidza neyedu yeWi-Fi network. Idzo nyowani Virtual Dash Mabhatani achashanda zvakafanana asi ivo vachatiponesa kubva pakuzadza imba yedu nevatengi mabhatani. Tichava navo varipo zvese muapp yeAmazon yeIOS uye pawebhusaiti yeAmazon, kana tango pinda mukati medu Amazon Premium nhoroondo. Mukupedzisira iwo mapfupi ekuti titenge zvakajairika, uye mune ino kesi ndinoona ichinyanya kukodzera. Pari zvino Haisi kuSpain asi zvingangoita kuti ichavhurwa mumazuva mashoma anotevera tichifunga nezvekuti mabhatani eDash epanyama anga ari munyika yedu kweinopfuura mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Amazon inovhura chaiyo mabhatani eDash ekushandisa kwayo
Hugo Barra anoda kudzokera kuSilicon Valley uye anosiya Xiaomi
Chii chaunofanira kuita usati watengesa yako iPhone?